Hair Style – Yay Thu Ma
ခုနောက်ဆုံး ခေတ်စားနေတဲ့ ဆံပင်အရောင် ဆိုးနည်းအသစ်
လူတွေဟာ အမြဲတမ်းပြောင်းလဲစီးဆင်းနေတဲ့ ဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်းနောက် အမှီလိုက်ရင်း သူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်တွေ ကို ခေတ်နဲ့အညီ ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားလာကြပါတယ်။ ခုလည်း မကြာခင်က ခေတ်စားခဲ့တဲ့ ခရမ်း၊ အစိမ်း၊ အပြာ၊ အ၀ါ၊ မီးခိုးရောင်လို တစ်ရောင်ချင်းစီး ဆံပင်ဆိုးမယ့်အစား သက်တံ့ရောင်ဆိုပြီး အရောင်ခုနှစ်မျိုးစလုံး ဆိုးလာကြတာ အားလုံးအသိပါ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီလို အရောင်ခုနှစ်မျိုးစလုံး ကိုယ့်ခေါင်းပေါ်တင်ထားရတာဟာ လူတွေအာရုံစိုက်ခံရတာမို့ အလုပ်၊ ရုံး၊ ကုမ္ပဏီသွားရတဲ့ ပျိုမေတွေအတွက် ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။...
၂၀၁၇ဖက်ရှင်ရာသီမှာရေပန်းစားလာမယ့် Hair Fashionများ
ဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ သက္ကရာဇ်အပြောင်းအလဲ၊လူတွေရဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်မှု၊ ရာသီဥတုအပြောင်း အလဲ၊ ဈေးကွက်အခြေအနေစတဲ့အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲနေပေမယ့်ဖက်ရှင်ကတော့ဘယ်တော့မှပျောက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။အခုတစ်ခါ Shwemomရဲ့ မိန်းကလေးပရိသတ်တွေအတွက်၂၀၁၇မှာ ခေတ်စား လာမယ့် hair fashion တွေအကြောင်းကိုစုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အခုဖော်ပြပေးမယ့် hair fashionတွေထဲမှာ ရာသီအလိုက် ရေပန်းစားလာနိုင်တဲ့ hair color နဲ့hairstyle တွေ အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေရောင် ၂၀၁၇ရဲ့ ရာသီစာအဖြစ် ရေပန်းစားလာမယ့် hair colorကတော့ ရွှေရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ရွှေရောင်အမျိုးအစားတွေဖြစ် တဲ့ ရွှေညိုရောင်၊ ရွှေဖြူရောင်(platinum)နဲ့ပန်းရောင်သန်းတဲ့...
ဆံပင်ပါးတဲ့ ပျိုမေတွေ ဆံပင်ပျက်စီးခြင်းမရှိပဲ ကောက်သားရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ရမလဲ
ဆံပင်ပါးတဲ့သူတွေအတွက် အချိန်တိုင်း ကောက်လိုက်၊ ဖြောင့်လိုက် လုပ်နေမယ်ဆိုရင် ဆံပင်သားကို ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းအပြင် အစကတည်းက ပါးတဲ့ဆံပင်ဟာ ပိုလို့တောင် ပါးသွားနိုင်ပါတယ်နော်။ ဒီတော့ ဆံပင်ကို ပျက်စီးခြင်းလည်း မရှိ၊ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဆံပင်ကောက်သားလေးလည်း ရအောင် ဘယ်လိုဖန်တီးရမယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ၁။ ခေါင်းလျှော်ပြီးတဲ့အခါ ဆံပင်ကို လုံးဝခြောက်တဲ့အထိ ထားလိုက်ပါ။ အပူချောင်းနဲ့ ဆံပင်ကောက်သားရအောင် ဖန်တီးကြတဲ့အခါ ပျိုမေတွေ အများဆုံးလုပ်တတ်ကြတဲ့ အမှားက မခြောက်သေးတဲ့ ဆံသားတွေကို အပူချောင်းနဲ့...
တစ်နေ့ တစ်မျိုး Do it yourself… Hair program
1. မိမိဆံပင်ကို အပေါ်တစ်ထပ်အရင်ယူပြီး ကလစ်နဲ့ ညှပ်ထားပါ။ ပုံမှပြထားတဲ့အတိုင်း ဆံပင်တုဆက်ပါ။ ဆက်ထားတဲ့နေရာကနေ မူလဆံပင်နဲ့ ဆံပင်တုကိုရောပြီး ကျစ်ဆံမြီးကျစ်ပါ။ ဘယ်ဘက်မှာ ကျစ်ထားတဲ့ဆံပင်ကို အပေါ်ကနေပတ်ပြီး ညာဘက်မှာ ကလစ်အမဲနဲ့ ထိန်းလိုက်ပါ။ ထိုနည်းအတိုင်း ညာဘက်ကိုလဲ ကျစ်ဆံမြီးကျစ်အပေါ်ကနေပတ် ဘယ်ဘက်မှာ ကလစ်အမည်း ထိုးပါ။ ချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ဆံပင်စတိုင်လ်လေး ရပါပြီ။ 2. ပိုနီတေးပုံစံအတိုင်း ချာလီသားရေကွင်းနဲ့ ဆံပင်ခပ်မြင့်မြင့်လေးစီးလိုက်ပါ။ ဆံပင်ကို မုန့်ကြိုးလိမ်သကဲ့သို့ လိမ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်...
တစ်ချို့ကတော့ ဆံပင်မသန်တော့ဘဲ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဆံသားကျဲပါးလာတာကြောင့် စိတ်ညစ်နေကြပါတယ်။ ဒီလို ဆံသားမသန်စွမ်းတော့တာကတော့ အောက်ကအကြောင်းရင်းတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်က အကြောင်းရင်းတွေကို ဖတ်ကြည့်ပြီး ဆံသားသန်စွမ်းစေဖို့အတွက် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေကို သတိထားမိနိုင်ကြပါစေ။ မျိုးရိုးဗီဇ လူတစ်ဦးချင်းဆီမှာ ဆံပင်ပေါက်တဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေ မတူညီတတ်ကြပါဘူး။ လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်၂-နှစ်ကနေ၆-နှစ်အတွင်းဆံပင်ရဲ့ အရှည်က တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူညီတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အများစုမှာတော့၁-လအတွင်းမှာ ဆံပင်လက်မ၀က်လောက် ရှည်ထွက်လာ တတ်ပါတယ်။ အာဖရိကန်တွေထက် အာရှသားတွေ ကဆံပင်ရှည်တာ နည်းနည်း နှေးတတ်ပါတယ်။...